Inona ny efijery Login? | Ubunlog
Inona ny efijery Login?
Na dia rafitra miasa mora be sy mora ampiasaina aza ny Ubuntu, ny marina dia manana hevitra marobe toy ny rafitra fiasa sarotra kokoa izy io ary indraindray dia mahalasa adala ny ankamaroan'ny mpampiasa vao.
La Efijery fidirana Iray amin'ireo hevitra ireo ny olona mifangaro, na dia zavatra voalohany hitantsika momba an'i Ubuntu aza izany. Eny tokoa, ny efijery Login dia ny efijery izay isehoany ny anaran'ny anarana noforoninay tamin'ny fametrahana azy. Vantany vao ampidirintsika ny teny miafina, hisokatra miaraka amin'ny programa efa napetrakao ny birao Ubuntu Unity. Ity efijery fidirana ity dia manana safidy maromaro izay tsy fantatry ny maro ary tsara ho fantatra.
Ny voalohany dia ny Ubuntu Login Screen dia programa izay mitantana ny fotoam-pivahinianan'ny rafitra fiasa, ity programa ity fantatra amin'ny hoe lightdm ary azo ovaina toy ny saika ny zava-drehetra ao amin'ny Ubuntu izy io. Misy mpitantana fivoriana hafa toa an'i GDM, KDM, XDM na Slim.
Raha manapa-kevitra ny hampiasa Lightdm isika dia tsy maintsy fantatsika ny ampahany amin'ny efijery Login. Ny mpampiasa dia ampahany tena lehibe, toy ny teny miafina, fa koa, etsy ambany hitantsika fivoriana ho an'ny vahiny, fotoam-pivoriana tsy misy teny miafina ahafahantsika miditra amin'ny birao nefa misy alalana mihena. Raha mijery ianao, dia eo anilan'ny mpampiasa tsirairay no miseho ny sary famantarana Ubuntu. Raha tsindrio azy io dia hiseho avokoa ireo birao rehetra sy tontolo iainana napetraka tao amin'ny Ubuntu, izay ahafahantsika misafidy iray hiasa mandritra io fivoriana io na amin'ny fomba efa voafaritra mialoha.
Lightdm no mpitantana ny session na ny efijery Login ao Ubuntu
Raha mankany amin'ny ankavia ankavia isika dia hahita sary masina maro izay hijanona mandritra ny fotoam-pivoriana, ny iray amin'izy ireo dia ny bokotra off, mahazatra sy mora ny mamantatra azy. Ny widget hafa dia ny kalandrie sy ny daty, zavatra azontsika ovaina na jerena tsotra izao. Ary farany misy ilay mpandahateny hahafahantsika miovaova ny haben'ny feo. Hanana widget roa hafa koa isika, fitendry sy saribakoly, ny kitendry dia mampiseho antsika fitendry virtoaly mahasoa raha tsy mandeha ny klavier na afaka mampiasa ny totozy fotsiny isika. Ny saribakoly dia hampihetsika ny safidy fidirana hafa, ny fomba fampidinana ny vahaolana hijerena ireo sary masina sy litera lehibe kokoa.
Ny mombamomba ny Wallpaper na ny birao dia matetika no ananantsika eo amin'ny birao, na eo aza izany dia afaka manova sy manova izany isika noho ireo fitaovana fanaingoana toa ny Fitaovana fanoratana firaisam-po. Mora ny fanovana ary afaka manao ny rafitra fiasanay ho an'ny tena manokana raha azo atao.
Farany, afaka misoroka ny efijery fidirana amin'ny alàlan'ny fanondroana amin'ny «Tetikasa rafitra»Ny hanombohana mivantana ny fivoriana (zavatra tsy tokony hatao) tsy afaka manala ny programa mpitantana ny session mihitsy izahay, izany hoe, tsy ho afaka ny hanaisotra ny lightdm isika raha tsy mametraka manager session hafa iray, zavatra iray tokony hotadidina.
Mety ho fantatrao izao rehefa misy miresaka momba ny Lightdm na Xdm na mivantana rehefa miteny izy ireo «mampidira tenimiafina eo amin'ny efijery fidirana«. Mora sy tsotra izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Inona ny efijery Login?
Adolfo Jayme dia hoy izy:
Izaho dia iray amin'ireo mpandika teny Espaniola Ubuntu. Avelako ho anao ity naoty fohy ity hampahafantariko anao fa ity efijery ity dia antsoina amin'ny «écran fidirana» na «écran login». Raha te hisoroka anglikisma tsy ilaina ianao 😉
Etsy andanin'izay, ny mpitantana ny fotoana sy ny efijery mihitsy dia hevitra roa samy hafa: ny mpitantana sy ny efijery dia mifameno, avelao aho hanazava: ny mpitantana dia mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny backend ('motera') sy ny efijery fidirana (amin'ny teny Anglisy, mpamangy, miaraka amin'ny ny tendrony aloha ('Interface'). Noho io antony io dia mety manana interface maro na arahabaona napetraka. Ny an'ny Ubuntu dia "Unity Greeter", ohatra, saingy ny OS ambaratonga fototra dia manana efijery hafa, novolavolain'izy ireo, izay mampiasa LightDM ihany koa ho motera amin'ny asany.
Valiny tamin'i Adolfo Jayme
Pedro Duran Carreras dia hoy izy:
Salama, nametraka Ubuntu Server 20.04 aho ary rehefa miditra aho dia tsy afaka miditra, afaka manampy ahy ve ianao, inona no azoko atao? Misaotra Yun.
Valiny tamin'i Pedro Durán Carreras
Ubuntu 16.10 dia hanana Unity 8, Snappy Personal ary Mir amin'ny toerana misy anao
Puppy Linux 7.3 na Quirky Werewolf dia misy izao